तराईमा बाढीको पीडा यस्तो कहालीलाग्दो छ::Pathivara News
तराईमा बाढीको पीडा यस्तो कहालीलाग्दो छ
यो चुलोमा अहिले २१ परिवारले पालैपालो पकाएर खाने गरेका छन्
केहि दिनदेखि हामी सर्लाही र रौतहटका बाढी, डुबान र पैह्रो पीडितका दुखमा मल्हम लगाउने प्रयासमा जुटेका छौ !
गाउँमा जादा अन्धकार छ ! बाल्ने बिजुली छैन । खानेपानीको मुहान र धाराको पाइप पुरिएको छ ! इनार, कुवाको पानी पुरै धमिलो छ ! लाउने लुगा, ओढ्ने ओछयाउने, खाने सामल सबै डुबेको छ पुरिएको छ र बाढीले बगाएको छ !
बच्चा, सुत्केरी, बृद्धलाई रुघाखोकी ज्वरोले च्यापेको छ ! उनीहरुको घर गाउँको स्कुल बनेको छ !
रौतहटको गुजरा गाउँपालिका वडा नम्बर १ को ठुलो मनर्वामा ६ दिन देखि २१ परिवारका २२७ जना दलित जातिमा पर्ने रामहरु पालैपालो एकै चुलोमा खाना पकाएर खान्छन । सबै ठाउँ बाढिले पुरेपछि तथा बगाएपछि उनीहरुलाई बचाउन सहारा त्यही एउटा चुलो बनेको छ !
त्यस्तै गुजरा गाउँपालिका वडा नम्बर ७ प्रतापपुर पलटुवामा ३१ परिवार मुसलमान र राम समुदायका २७६ जना अर्काको घरमा शरण लिएर बसेका छन ! धर्म र जात फरक छ तर बिपत्तिमा उनीहरु एकै छानोमुनी बसेका छन् । उनीहरुको घर भएको ठाउँमा अहिले लमाहा खोला बगेको छ ! तथा खोलाको ताल बनेको छ ! त्यो जमिनमा उनीहरुको पुर्खाको जिवन बितेको थियो तथा उनीहरुको सपना जोडीएको थियो !
यी दुई गाउँ प्रतिनिधि मात्रै हुन, अहिले बाढिले तराईका बिभिन्न जिल्लामा पुरयाएको क्षतिको । सयौं गाउँ र हजारौं ब्यक्तिको अवस्था यस्तै छ ! तर, सरकारले अन्य जिल्लामा जस्तै रौतहटमा पनि सरकारले राहत बाड्न सामाजिक संघ संस्थालाई रोक लगाएको छ ! तर हप्तौं बित्दापनि सरकार त्यहाँ पुगेको छैन !
जिल्ला भुमिअधिकार मंच रौतहटको अगुवाइमा डुबान नभएको गाउँबाट चाल,दाल, तरकारी, पिठो,तेल उठाएर बाढि पीडितलाई भोकबाट बचाउने प्रयासमा हामी ती ठाउँमा गएका थियौं । सरकारभन्दा छिमेक छिमेकीको पीडामा मल्हम बन्नु स्वभाविक हो, बनेका छन ! जहाँ दुख छ पीडा छ त्यहाँ जातको कुरा हुदोरहेनछ !
सर्लाहीको साविक कर्मैया गाबिस अहिले बागमती नगरपालिका जहाँ झन्डै १७६ घरमा पानी पसेको छ खाने सामल भिजेको छ कैयौं घर ढ्ल्न तयार भएर बसेका छन ! जाने कुनै ठाउ छैन बसौं घर पानीले भरिएको छ ! दिन गुजार्न धौ धौ छ !
प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छैन निकायहरु जनप्रतिनिधिविहिन छन ! गाडी नपुग्ने ठाउमा न राहत पुगेको छ न त कर्मचारी नै ! पहाडमा भुकम्पको पीडा र तराईमा बाढी र डुबानको पीडा उस्तै उस्तै भएको छ !